Rivotra fampitandremana fantsom-panafody avo lenta mankany amin'ny Aluminum Lug
Ny tanjon'io fantsom-panaterahana an-tsokosoko io ho any amin'ny aluminium ao anatin'ny 30 segondra.
DW-UHF-6KW-III mihary fanamafisana fampitaovana famatsiana famoronana tanana
HLQ coil mahazatra
Ny hafanana: 250 eo ho eo°C (482°F)
Fotoana: segondra 25
Fandehanana amin'ny famarotan-tena:
Mba hanombohana ny fizarana famandrihana induction, napetraka tao afovoan'ilay coil ny aluminium lug. Avy eo dia napetraka tao anaty tadona niaraka tamin'ilay mpivarotra ilay tariby litz. Nanomboka niempo ny mpivarotra taorian'ny 25 segondra teo ho eo amin'ny 250 teo ho eo°C (482°F). Rehefa avy niempo tanteraka ilay mpivarotra dia avela hangatsiaka mandritra ny iray minitra alohan'ny hanohizana.
Nahita fahombiazana ireo fitsapana ireo. Afaka nanaporofo an'izany izahay induction heating dia fomba iray haingana kokoa hanamafisam-pandrindrana tariby amin'ny halatra aluminium fa tsy mampiasa fanilo toy ny nataon'ny mpanjifa taloha. Ny fitiliana fampiharana dia nampiseho ny fitomboan'ny vokatra sy ny fifehezana ny fotoana sy ny hafanana.
Sokajy Technologies Tags fantsom-tariby aluminium, induction soldering aluminio, induction soldering fanaterana, induction soldering wire, RF fanolorana aliminioma, fametrahana an-tariby vita amin'ny alumina, drazana, tariby famatsiana ho an'ny aluminium Post Fikarohana